“Raha Tsy Misy Zavatra Hafa Omanin’ny Fiainana Ho Ahy, Farafaharatsiny Antenaiko Ny Ho Afaka Miaina Am-Pilaminana”: Fijoroana Vavolombelona Ataon’ireo Mpitsoaponenana Namakivaky ny Mediteranea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2016 12:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Ελληνικά, Swahili, Español, 日本語, Deutsch, polski, Français
Pikantsary avy ao amin'ny Youtube,avy amin'ny asa fanavotana nataon'ny tetikasa SOS Mediterane
Miaraka amin'ireo fifandonana sy rahon'ady ataon'ny mpampihorohoro ao Afrika Avaratra sy Andrefana ary ny ady an-trano ao Siria, mitohy hatrany ny fanaovana vy very ny ainy ataon'ireo mpitsoaponenana mitaingina sambo tsy zarizary mamakivaky ny ranomasina Mediterane mba hamonjy an'i Eoropa. Tamin'ny 2015, novinaina ho maherin'ny iray tapitrisa ireo olona niditra tao amin'ny habaka Schengen tamin'ny alàlan'ny ranomasina. Marobe ny ain'olona nafoy tamin'ireny fiampitàna ireny ary samy nahatsiravina daholo. Araka ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fifindràmonina, nanodidina ny 3.072 ireo olona maty na nanjavona teny an-dranomasin'i Mediterane tamin'ny 2014 noho ny fiezahany hifindra monina ho any Eoropa. Ny faran'ny 2014, araka ny lazain'ny Kaomisera Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpifindra monina, ny Fiombonambe Eoropeana no nandray ny 6 % tamin'ireo mpitsoaponenana nanerana ny tany.
Ny sambo Aquarius tamin'ny 2012 tao Cuxhaven CC BY-SA 3.0
Tao anatin'ny tranganà hamehana tsy miato tahaka izany no nijoroan'ny tetikasa SOS Méditerranée. Ny SOS Méditerranée dia fikambanana iray manokantena mitondra fanampiana ho an'ireo olona tra-pahasahiranana eny an-dranomasina eny: olona izay ahitàna lehilahy, vehivavy na ankizy, mpifindra monina na mpitsoaponenana, tandindonin-doza mahafaty mandritry ny fiampitàna ny Mediterane. Vola avy amin'ny tsy miankina sy fanohanana avy amin'ny fanjakàna no iasan'ny tetikasa. Ny vola voaangona dia entina hanofàna sambo, ho amin'ny fandaniana amin'ny fikojakojàna isanandro ary ny asa fanavotana. Ny sambo Aquarius no ampiasain'ilay tetikasa. Tomponkevitra tamin'ny nanangànana ilay tetikasa ilay Alemàna kapitenin-tsambo, Klaus Vogel sy ilay vehivavy frantsay Sophie Beau, tomponandraikitry ny fandaharanasa mijery ny maha-olona. Natsangana taorian'ny nitsaharan'ilay tetikasa italiana Mare Nostrum nosahanin'ny Tafika an-dranomasina italiana, izay nikendry ihany koa ny hanavotra ireo mpifindra monina tra-doza eny an-dranomasina. Misy lahatsary iray fanadihadiana notontosain'i Jean Paul Mari manoritsoritra ireo fanamby isanandro nodiavin'ilay tetikasa nandritry ny herintaona. Ity ny ampahany tamin'ilay lahatsary fanadihadiana :
Ao anatin'ny boky firaketana ny dia nataon'ny SOS Méditerranée no ahitàna fijoroana vavolombelona marobe avy amin'ireo mpifindra monina. Indro ny sasantsasany tamin'ireny fijoroana vavolombelona ireny:
Kebba 22 taona, mpanefy avy any Gambia izy. Nandositra ny fireneny noho ny nataon'ilay mpitondra jadona nifehy an'i Gambia sy ny tsy fisian'ny asa :
Ny hany làlana tokana ahafahana miroso dia ny fidirana ho miaramila, nefa tsy tiako ny hanao izany. Namoy ny raiko aho ary tsy maintsy nanohana ny reniko sy ireo anabaviko ka dia nandeha nitady asa tany an-toeran-kafa. Tany Libia, nisy naka an-keriny aho. Notazonina tany aminà toby iray nandritry ny volana roa. Zara raha nisy sakafo, tsy nisy rano, tsy nisy toerana hatoriana. Olona enina tamin'ireo fantatro tao an-toby no novonoin-dry zareo. Hoy izy ireo tamiko hoe ‘omeo anay ny volanao raha tsy izany vonoinay ianao’, ary tena tanterahan-dry zareo ny teniny. Te-hody tany aminay aho saingy tsy nahita izay ho-enti-manana ny fiverenana any. Araka izany dia noraisiko ny fanapahankevitra handeha ho any Eoropa. Notazonin'ireo mpanondrana tao aminà toby iray izahay nandritry ny roa na telo herinandro. Rehefa tonga ilay andro, nafatratr'izy ireo tao anaty sambo fingotra iray izahay. Tsy nisy kapiteny, fa dia izay sitrapon'Andriamanitra fotsiny. Nofinofy roa no ahy— ny ho lasa mpanefy eny an-dranomasina ary hanoratra boky iray momba io fitetezana io. Saingy raha tsy misy zavatra hafa omanin'ny fiainana ho ahy, farafaharatsiny antenaiko ny ho afaka miaina am-pilaminana.
Pikantsary avy aminà lahatsarim-panavotana iray nataon'ilay tetikasa tao amin'ny fantsony YouTube
Kameroney i Cyrill. Mpiasa birao nanana toerana ambony izy ary nandositra ny rodorodo nataon'ny Boko Haram tany avaratry ny fireneny. Tantarainy ireo trano fampijaliana, ny halatra ary ny daroka niainana tany Libia talohan'ny dia:
Toerana iray ivelan'izao tontolo izao i Libia, izay tsy misy intsony resaka maoraly. Tontolo iray niverina ho amin'ny fiainana ara-nofon'ny biby fotsiny. Ireo ankizy mianatra mifititra amin'ireo mainty hoditra hitany eny an'arabe, mitango vola amin'izy ireny amin'ny alàlan'ny fametrahana antsy eny an-tenda na mianatra mampijaly mpifindra monina eo imason'ny ray aman-drenin'izy ireo. Resahan-dry zareo ny fanolànana tsy misy fepetra manjo ireo vehivavy eny an-dàlana, ireo mpampiditra an-tsokosoko na mpiandry fonja tsy valahara midaroka an-dry zareo sy mandrora azy no sady mamerina miteny hoe tsy sahaza ny mofo omena azy akory ry zareo.
Tanora Siriana 22 taona nonina tao Damas i Gode Mosle . Ao Soeda izy ankehitriny, saingy mitahiry fahatsiarovana maharary momba ilay fitetezana ranomasina:
Nilaza tamin'ireo namako any Siria aho mba tsy handeha amin'ireny sambo ireny. Tsy maintsy mandeha mankany Tiorkia sy Gresy ry zareo, na dia lafobe aza izany. Teo amin'ny 700 teo ny olona tao an-tsambo nefa tsy nisy toerana afa-tsy ho an'ny antsasak'izay ihany raha ny marina. Biby mihitsy ireny mpampita an-tsokosoko ireny. Mivazavaza amin'ireo olona ry zareo ary mikapoka rehefa mampiondrana an-tsambo. Karazana fampijaliana ara-tsaina ilay izy, izay nanomboka talohan'ny resaka sambo mihitsy. Afrikana roa no maty tao anaty lakalin-tsambo tao. Sempotra ry zareo, tsy afaka nifoka rivotra noho ny fofona navoakan'ny milina. Mibingo ilay izy, tsy afaka itsanganana na ihetsehana. Raha vao misy iray manandrana manao izany dia toy ny manambana ny hivadika ilay sambo. Maromaro ihany ny kiakiaka. Tsy hamerina ny dia tahaka izay intsony aho. Tsy haiko ny hanadino izay hitako. Te-hiaina ny olona, izany no antony niondrànan'izy ireo tanatin'ireny sambo ireny.